Umhlahlandlela ophelele we-MCSA 2016 Certification | ITS
Umhlahlandlela ophelele we-MCSA 2016 Certification
Isiqinisekiso se-MCSA 2016
Ubani ongahamba I-MCSA 2016 isitifiketi?
Umuntu ongaphansi kokudinga ukuqala umsebenzi wakhe ekuphathweni kwengqalasizinda ye-Microsoft iseva.
Uchwepheshe ozodinga ubuyekeze ikhono lakhe elikhethekile kusuka kuseva elungisiwe kunomunye wakamuva
I-Datacenter Abaphathi / izakhiwo zokuhlela
Iyiphi inombolo yezivivinyo ezikhona?
Ukuqeda i-MCSA kufanele ubonise izivivinyo ezintathu.
Iyiphi inombolo yezincwadi ezikhona?
Kunezincwadi ezintathu zokuvusa i-MCSA
Ingabe kukhona okudingekayo kule setifiketi?
b.Uma u-MCSA 2012 uqinisekisiwe, ngaleso sikhathi ungafaka isitifiketi sakho ku-MCSA 2016 ngokunikeza ukuhlolwa okulodwa (70743)
Kungani i-MCSA ene-Server 2016
Lolu hlelo lokusebenza lwe-server lunikeze ithoni yezinto ezintsha ezithatha wena ezingeni elihlukahlukene lokuphatha, futhi futhi futhi kukusiza ukuthi ulondoloze izindleko zobudlelwane bakho. Nasi uhlu lwezici ezintsha ezinikezwe ku-Server 2016.
I-Software Defined Datacenter
Iseva ye-2016 ikunika amandla okuguquguquka futhi ubiza imali egciniwe yedatha, lapho singasebenzisa khona i-software echazwe ngekhompyutha, Isitoreji nokuxhumana ukuze senze idatha yethu yedatha. [Akungaphezu kokungabaza uma lokhu kulungile. ]
Izinhlinzeko ze-Server 2016 ezakhiwe nge-Nested in-hyper-v, ngakho-ke manje ungangenisa i-hyper-v ngaphakathi komshini obonakalayo.
I-Microsoft inikeze iseva encane kakhulu, okuyinto encane kunesikhungo sevava.
Ukunikezwa kwesicelo sokuhlukaniswa kwesicelo kudlala izingoma zamagama emisha.
Nikeza ukuhlukaniswa kwe-hyper-v
Ukuphatha amafasitela kanye ne-hyper v.
Kukwenza ukuthi ukhonjise i-VM yakho kusuka ku-HOST ngaphandle kokunye ukucushwa.
I-Linux Boot Safe
Njengamanje singenza isizukulwane i-2 linux VM ku-hyper-v.
Ukwenza ukuphathwa kwe-VM ehlukahlukene kungadingeki
Ukuthuthukisa i-Failover Cluster
Yenza ifu lifakaze ngokusebenzisa i-azure
Isitoreji se-block agnostic block replication
Isitoreji Isikhala Ngokuqondile
Isikhala sesitoreji ngqo susa isidingo se-SAS esabelwe.
I-virtualization yesistimu inikeza ukusungulwa kokufeza i-SDN.
Lezi yi-akhawunti yonke hhayi izici ezintsha kuphela esinazo kwi-server 2016, kuphela okumbalwa okugxila kukho. Uzothola okungaphezulu kwalokhu ku-certification yakho ye-MCSA.
Lapho usuqedile isitifiketi sakho se-MCSA nge-server 2016 uzoba namandla okusebenza nabo
Ukufakwa, Isitoreji kanye ne-compute, i-DSC
Ukuxhumana okuyinto i-IPV4 / 6, i-SDN, i-NPS, i-NAP, i-VPN, i-DAS, ihlela ukusebenza kahle.
Ubunikazi bukhomba ADDS, ADRMS, ADFS, ADCS, DAC, AD Azure.
Umqeqeshi oqinisekisiwe we-MCSA - Imibuzo Yokuphendula Nezimpendulo
I-MCSE Certification - Yonke Okudingeka Uyazi